Alahady 05 Aprily 2020 - FJKM Amparibe Famonjena
Alahady Fandraisana ary Alahadin'ny Sampan-drofia
" Vavolombelon'ny Fitsanganan'ny Tompo ny Mino".
"Vavolombelon’ny Fahefan’ny Tompo Ny Mino » Marka 11 :1-11.
« Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriany dia samy niantso hoe: Hosana! Isaorana anie Izay avy amin'ny anaran'i Jehovah! » (Marka 11:9)
Alahady voalohany amin’ity volana aprily izao ary raha ny fiainan’ny Fiangonana dia alahady fandraisana ny fanasan’ny Tompo ary mandray lohahevitra vaovao isika eto amin’ny sahan’ny Fjkm dia ny hoe « Vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo ny mino« . Alahadin’ny sampan-drofia koa anio ary alahady fahatelo iarahantsika isan-tokantrano manaraka ny fanompoam-pivavahana amin’ny alalan’ny horonan-tsary ao amin’ny pejy facebook ‘ny Fiangonana. Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa no nitarika ny fotoana, izay nanaraka ny litorjia amin’ny endriny faharoa, ary ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina no nitory ny tenin’Andriamanitra.
Asaina ary isika Fiangonana Amparibe Famonjena « mahatahiry ny finoana, mifankatia ary miasa amin’ny fahazotoana » hidera sy hanome voninahitra an’Andriamanitra amin’ny alalan’ny Salamo 47 and. 1-2;5-7 « Mitehafa tanana, ry firenena rehetra; mihobia ho an’Andriamanitra. Fa Jehovah no avo indrindra ka tokony hatahorana; Mpanjaka lehibe ambonin’ny tany rehetra Izy. Efa niakatra tamin’ny fihobiana Andriamanitra, Jehovah niakatra tamin’ny fitsofana ny anjomara. Mankalazà an’Andriamanitra, eny mankalazà; mankalazà ny Mpanjakantsika, eny, mankalazà. Fa Mpanjaka amin’ny tany rehetra Andriamanitra; mahaiza mankalaza tsara ianareo. »
Asaina isika hiredona ny hira Ffpm 18: 1 « Ny feonay rehetra izao« .
Tao amin’ny vavaka fiderana dia niantso an’Andriamanitra Ray Zanaka ary Fanahy Masina ny mpitarika, Izy izay mitahiry ny fanekeny, ny fahasoavany sy famindrampony amin’ny zanany izay efa nofidiany sy nantsoiny tamin’ny anarany. Midera Anao izahay , hoy izy, misaotra, mankalaza ary manome voninahitra Anao fa Ianao no Mpanjakanay hatrizay. Tena tsinontsinona sy bitika izahay raha mandinika ny fiainanay zanak’olombelona, tsy mahay na inona na inona, tsy mahavita akory mitondra ny fiainanay manoloana ny zava-tsarotra lalovan’ny firenena ankehitriny. Izany no hahatsapanay ny maha-tsinontsinona anay ary mampiarihary ny hery sy fahefana ary fahalebiazanao Andriamanitra Izay mitondra ny fiainanay zanak’olombelona ary izany indrindra no hanomezanay voninahitra Anao hatrany hatrany. Misaotra Anao izahay, hoy izy, afaka manatanteraka izao fanompoam-pivavahana izao, misaotra hatrany fa tsy diso ny teninao sy ny zava-tsoa avy Aminao fa manana ilay anjara tsara efa nomaninao ho an’ny zanakao Ianao. Ankasitrao, hoy izy, izao fotoana tanterahina izao . Fanahy Masina ô, miaraha aminay hatrany hatrany, ho anay mitondra izao fotoana izao, ho an’ny kristiana rehetra any amin’ny isan-tokatrano any, hanafana sy hampifaly anay ary hanome hery izao fotoana izao hahatonga anay hitombo amin’ny finoanay ka hahatonga anay hijoro ho vavolombelon’ny anaranao, dia ny vavolombelon’ny fitsangananao tamin’ny maty izany. Manetry tena izahay, mamelà ny helokay, mamindrà fo aminay, mibebaka Aminao izahay amin’izay fahotana sy fahalemenay, ny nataonay sy izay rehetra tsy tsaroanay akory, avelao ny fahotanay. Ataovy manana anjara amin’ny rà nalatsakao tao Kalvaria izahay mba hahatonga anay ho olona voavela heloka. Raisinay amin’ny finoana sy fanantenana izany famelan-keloka sy famindram-po atolotrao anay izany . Misaotra Anao amin’ny fitiavanao, ny fanatrehanao sy amin’ny zavatra rehetra. Amin’ny anaran’i Jesoa Lohan’ny Fiangonana no nanaovana izao vavaka izao. Amena.
« Ary noho izany, dia raiso avokoa ny fiadian’ Andriamanitra, mba hahazoanareo hanohitra amin’ ny andro mahory; … » Efesiana 6 :13a
Io no adinin-tSoratra Masina noraisin’ny mpitarika Razafindrasata Abel ka naverina niarahana namaky. Misedra zavatra sarotra ny firenena amin’izao vanim-potoana diavintsika izao, hoy izy. Ary tsy eto Antananarivo na Madagasikara ihany fa eran’izao tontolo izao mihitsy. Miatrika ady isika izao ary Andriamanitra tsy mijery antsika irery fa manome fitaovana entina hanohitra izany fahavalo manafika ny firenena izany, indrindra ny kristiana.
Miisa enina ireo fitaovana entin’Andriamanitra hiadiana amin’izany ratsy izany. Ny tenin’Andriamanitra dia miteny amintsika hoe « Raiso avokoa ny fiadian’Andriamanitra mba hahazoanareo hanohitra amin’ny andro mahory »
Ny fahamarinana sy ny rariny : miaina amin’io isika, izay ny fomba fampiasana azy
Ny fahavononam-panahy : entina mandeha na aiza na aiza misy antsika
Ny finoana : tazomina mafy ny finoana hiatrehana ny andro mahory
Ny famonjena : raisintsika avy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy
Ny tenin’Andriamanitra : ampiasaina entina hanohitra ilay ratsy
Ny vavaka : ampiasaina amin’ny fomba rehetra mba hahatonga antsika maharitra amin’ny ady izay atrehantsika
Teo am-pamaranana dia naverina novakiana indray ny Efesiana 6 :13a ary nivavaka nisaotra an’Andriamanitra fa na dia miaina ao anatin’ny fahoriana aza dia mbola omeny fitaovana, omeny hery hafahana miatrika, manohitra ny loza mananontanina ka noho izany vonona hijoro mba ho mpanompo mahasoa ary ho mendrika amin’ny asa tsara rehetra. Amena
Ny hira Ffpm 808 :1 « Eo an-tratanao Jesoa » no natao avy eo.
Ny hira ao amin’ny fihirana fanampiny 34 and.1,2,3 « Tompo malala » no natao. Raharijaona Valiha no nitari-bavaka sy namaky ny Testamenta Taloha ary Raharijaona Nantenaina no namaky ny Testamenta Vaovao. Ny Perikopa androany dia ny Salamo 118:24-29, Jaona 12:12-19 ary Apokalipsy 15:1-4. Tao amin’ny vavaka natao no nankasitrahana an’Andriamanitra amin’ny fitiavany sy famindram-pony nitaona hamaky ny Teny. Tianao izahay , hoy ny mpivavaka, matoa mbola omenao ny Teninao mampahafantatra ny sitraponao. Fa na dia mbola hiaran’izao valan’aretina izao aza ny firenena dia eo ny Teninao mampahery anay. Nangatahiny ny Fanahy Masina hanazava ny Teny. Natao amin’ny anaran’i Jesoa izany vavaka izany.
Ny Fihirana Fanampiny faha-2, and.1, 3 « He manolo-tena« no nohiraina mialoha ny toriteny.
Alahady voalohany amin’ny Herinandro Masina ity alahady ity, hoy ny Mpitandrina, fanarahantsika ny hazofijalian’ny Tompo ary fidiranana amin’ny lohahevitra vaovao, volana aprily, izay manao hoe « VAVOLOMBELON’NY FITSANGANAN’NY TOMPO NY MINO ». Ary koa, alahadin’ny Sampandrofia nomena ny lohahevitra hoe « VAVOLOMBELON’NY FAHEFAN’NY TOMPO NY MINO » izay raisina ao amin’ny Marka 11 :1-11.
HOSANA ! izany teny izany no misongadina ao amin’io Filazantsara io. Mifono hevitra lalina izany teny izany satria midika hoe mila vonjy isika. Ary rehefa miaraka amin’ny teny hoe ISAORANA dia maneho ihany koa fanandratana sy fihezahana hampiseho ny maha izy azy ilay hiantefan’ny teny izay atao. Jesoa avy any Nazareta no hiantefan’izany teny izany. Antony anankiroa no nihorakorahan’ny vahoaka hoe HOSANA sy ISAORANA dia Jesoa ilay Mpanjakan’ny fanafahana sy Jesoa ilay Mpanjakan’ny fiadanana.
Jesoa ilay mpanjakan’ny fanafahana
Eto dia manambara hevitra fahariana izay teny hoe fanafahana izany. Koa izay hiantefan’izany dia nohariana indray ary nandray fanavaozana fiainana ao amin’ny Tompo. Fanafahana satria afaka amin’izay mamatotra ny olona ny mino, afaka koa amin’ny fahefana mangeja ary afaka amin’ny tarazo ratsy nifandovana. Ny olona omen’ny Tompo ity fanafahana ity dia tena tonga olom-baovao. Hoy i Paoly hoe « Koa raha misy olona ao amin’i Kristy dia olom-baovao izy ; efa lasa ny zavatra taloha, indreo fa tonga vaovao ireo » (2 Korintiana 5 :17)
Ao amin’ny bokin’ny Apokalypsy 15 :1-4, Perikopa izay novakiana, dia manambara ny hiran’ireo olona naharesy afaka tamin’ny biby sy ny sarin’ny biby. Nihira ny fihiran’ny olona izay navotan’ny Tompo, fihirana nataon’i Mosesy izany. Notontosain’ny zanak’ondry koa io. Koa io izany no fihiran’ny mpandresy, fihiran’ny manana fiainam-baovao. Fanandratana ny fahefan’Andriamanitra no aseho anatin’ity boky ity
Amin’izao zavatra misy eto amin’izao tontolo izao ity dia aoka isika mino ho sahy miantehatra amin’ny fahefan’ i Jesoa Kristy ilay Mpandresy, Ilay Andriamanitra manambara ny fanafahana.
Mafy tokoa izany tsy fahafahana mandeha mivavaka any an-trano fiangonana izany fa voatery mihiboka an-trano nefa alahady ny andro, indrindra amin’izao alahady fandraisana izao, tsy afaka miray latabatra amin’ny Tompo. Mangataka amin’ny Tompo isika ny hadevonany ity aretina « Coronavirus » ity, ho tahaka ny nanafahany ny zanak’Israely tany Egypta amin’izao fotoana hiomanana amin’ny Paska izao. Io fihibohana io no heverina ho fanafahana mampisinda izany. Mangataka vonjy amin’ny Tompo mba tsy ho kivy amin’izao fotoana izao.
Mpanjakan’ny fiadanana ny Tompontsika
Ireto avy ny hevitra fonosin’zany fiadanana izany : fandriam-pahalemana, feno fahasambarana, lavitry ny tebiteby rehetra.
Mitondra fitahiana ho an’ny olony Jesoa. Mizara fahasoavana ho an’izay mino sy manatona Azy Izy ary manome fitsaharana ho an’izay matoky izany maha Mpanjakan’ny fiadanana Azy izany. Mifalia sy miravoravoa amin’izao isika, hoy ny mpanao Salamo raha vakiana ny Salamo 118 : 24-29. Nidera ny fahatsaran’Andriamanitra ny mpanao Salamo noho ny famindram-pon’Andriamanitra izay maharitra mandrakizay ho an’ny olony. Aoka isika mba ho tena vavolombelon’ny fahefan’Andriamanitra mihitsy :
Mivavaha ka aza mitsahatra ; minoa ny asan’ny Fanahy Masina izay maharesy ny fahavalo rehetra. Io Fanahy Masina io no miasa ao anatin’ny mino ka mahatonga azy hahatana mafy ny finoany ka hahajoro ho vavolombelon’ny Tompo hatramin’ny farany.
Vavolombelona tamin’ny fitsanganan‘ny Tompo tamin’ny maty isika. Zava-dehibe izany satria efa nanaiky azy isika ; resiny ny fahafatesana, resiny ny fahavalo rehetra ka eo ampelatanany ny fahefana rehetra hatrany an-danitra ka hatraty an-tany. Na ny fahoriana ety an-tany aza dia efa fantatry ny Tompo ka efa noreseny ka natolony ny Fiangonana izany fandresena izany. Koa amin’ny zavatra rehetra dia aoka isika hatoky sy hanaiky ny fahefan’ny Tompo miasa ao amintsika. Tena Mpanjakan’ny fanafahana Andriamanitra, Mpanjakan’ny fiadanana afaka manome antsika ny zavatra rehetra ho an’izay tiany.
Ny hiran’ny Hasin’ny Famonjena « Jesoa Tokinay » no norenesina taorian’ny toriteny.
Ny Mpitandrina Raharijaona no nanatanteraka izany nisaorany an’Andriamanitra manome ny Teny mamelombelona ny fo sy ny saina ary ny fanahy mba hijoroana ho vavolombelon’ny fitsanganan’ny Tompo tamin’ny maty nanehoany ny fandreseny . Hoy izy: Ianao tokoa Tompo o no mpanjakan’ny fahafahana sy ny fiadanana, ataovy velona ao anatinay izany hiainanay ary ho atokisanay. Mahatsiaro tsy mendrika izahay eo anatrehan’izany Teny izany. Na dia nomena fahafahana sy fiadanana aza izahay dia tebitebintsaina mandrakariva no hiainanay, indrindra ao anatin’izao vanim-potoana izao. Mangataka ny famindram-po, ny famelan-keloka, fa tsy mahatoky ny fahefanao ka miarihary ny tsy fahatanterahanay, ny fanaovanay izay tsy mendrika eo anatrehanao ka mampalahelo Anao. Ifonanay izany.
Tsy mba mivadika amin’ny Teninao Ianao Andriamanitra o, mijery ny olonao mandrakariva fa izahay mangorakoraka dia tsy mba ataonao tsinotsinona.Izany no anantenanay ny famelan-keloka avy Aminao. Nivavaka izy ho an’ny Fiangonana, ny mpitondra Fiangonana, ny mpitory Filazantsara, ny kristiana rehetra eto amin’ny Fjkm Amparibe Famonjena, izay rehetra manaraka izao fanompoam-pivavahana izao, ny kristiana rehetra manerana ny Nosy fa na ny tsy kristiana aza. Nentiny am-bavaka ny fanombohana ny herinandro masina na dia ao anatin’ny fihibohana aza izany. Aoka hitombo finoana sy fanantenana amin’ny fiadiana an’ity areti-mandoza ity , mba ho resy tanteraka anie, ny marary mba ho sitrana. Nivavaka izy mba hahazo vaha-olana ny sahirana, handray fampiononana ny azom-pahoriana, hahazo valiny izay manana hataka manokana. Nofaranana tamin’ny vavaka nampianarin’ny Tompo izany.
Nasain’ ny mpitarika ny fotoana avy eo hijoro ho vavolombelon’ny Tompo isika avy nandre ny Tenin’Andriamanitra ka hiara hanonona ny fanekem-pinoana Apostolika laharana 1.
Nambaran’ny Mpitandrina Raharijaona fa zava-dehibe eo amin’ny fiainan’ny Fiangonana indrindra ho an’ny mpandray ny Fanasan’ny Tompo ny miray latabatra amin’ny Tompo isaky ny andro fandraisana. Tsy afaka manatanteraka izany aty am-piangonana anefa isika satria samy mbola mihoboka any an-tokantrano ankehitriny noho izao antony iarahantsika mahalala izao. Izao ny Tenin’ny Soratra Masina izay mahakasika izany fihombonana sy firaisana latabatra amin’ny Tompo izany « ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny Fanahy iray » 1 Kor.12:13. Raha nanambara izany ny Apostoly Paoly dia zava-dehibe teo amin’ny fiainan’ny Kristiana hatramin’izay izany firaisana latabatra amin’ny Tompo izany. Manomana ny fo amam-panahintsika izany na dia tsy eo anatrehantsika aza izany mofo manambara ny tenan’i Kristy sy ny divay manambara ny ràn’i Kristy.
« He! ianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano! Ary ianareo izay tsy manam-bola, avia, mividia, ka homàna! Eny, avia, mividia divay sy ronono, nefa tsy amim-bola, na amin-karena. Nahoana ianareo no mandany vola amin’izay tsy hanina, ary ny vokatry ny fisasaranareo amin’izay tsy mahavoky? Mihainoa dia mihainoa Ahy, ka hano izay tsara, dia aoka hiravoravo amin’ny matavy ny fanahinareo. » (Isaia 55:1-2)
Nivavaka ny Mpitandrina ka niantso ny Tompo, tompon’ny finoana sady mpanefa azy, tompon’ny Sakramentan’ny Fanasana , mahafantatra ny hetaheta ny amin’ny fihombonana sy firaisana amin’ny Tompo, izay mampiray ihany koa ny samy kristiana ho tena iray ao amin’i Kristy. Indreto izahay, hoy izy, mivavaka Aminao, na dia tsy afaka manatanteraka izany aza, dia mametraka feno eo am-pelatananao ny hahatsiarovana ny halebiazan’izany fandraisana anjara amin’ny Fanasana izany, mba tsy ho kivy, eny tsy hanadino an’izany mihitsy aza, fa hanao izany ho zava-dehibe eo amin’ny fiainanay. Ataovy tsapanay, hoy izy, fa manasa anay isan’andro Ianao fa fanehoanao aminay fa eto aminay mandrakariva Ianao. Nentiny am-bavaka ireo mpitondra fanjakana, manomboka amin’ny Filoham-pirenena hatraty amin’ny fokontany, hijery sy hitsinjo azy ireo indrindra amin’ny fiadiana amin’izao valan’aretina izao, hanome azy fahendrena sy fahatoniana, tanjaka sy hery ary fahasalamana, finiavana sy fitiavana ny vahoaka Malagasy. Nivavaka izy ho an’ny mpiasan’ny fahasalamana tsy ankanavaka, nangataka ny fanampiana azy amin’ny ezaka rehetra hataony hahalevona izao valan’aretina izao, ho an’ny marary mba ho sitrana soa aman-tsara, ho an’izay mbola tsy voa, samy hahay hiaro ny tenany amin’ny fahamalinana samihafa. Nentiny am-bavaka ny ezaka rehetra mbola hatao ao anatin’izao fihibohana izao, ho eo amin’ny Tompo mandrakariva anie ny fianantsika. Nisaotra ny Tompo izy nanome ny fotoana tahaka izao.
Nanohy ny ranom-bavaka Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa nitondra ny vahoaka Malagasy manontolo eo am-pelatanan’Andriamanitra ary ny vahoaka kristiana. Tsy hitsahatra izahay, hoy izy, misaotra Anao satria ny famindram-ponao no tsy mahalana ritra anay . Na dia tsy afaka mivavaka any am-piangonana aza izahay dia manana fotoana sy ny fitaovana toy izao hahafahana mihombona amin’ny vavaka ka mankasitraka Anao izahay. Fantatra fa manana ny hevitrao Ianao ho an’ity Madagasikara ity, ho an’ny Malagasy sy ho anay vahoaka kristiana. Aoka izahay tsy ho varimbariana foana ka manadino ny mivavaka miantoraka Aminao, hahay hanararaotra izao fotoana omenao izao hahatonga anay handini-tena mandrakariva.
Tehirizo eo ambany fahasoavanao ny fiainanay, hoy izy, ampitomboy ny finoanay . Misaotra anao fa arovanao ny Malagasy ary mangataka mba tsy sanatria hisy matin’izany aretina izany, angatahinay ny fahasitranan’ny marary, hiasa ny fanafody. Misaotra Anao nanome ny Teninao ary tehirizo eo anatrehanao ny fiainanay mba ho vavolombelonao hatrany izahay mandray ny valim-bavaka avy Aminao sy mitondra ny fandresenao Kristy. Izany vavaka izany, hoy izy, dia angatahinay ho an’ny zanaky ny Fiangonana n’aiza n’aiza misy azy, hatrany am-pitandranomasina any, fa fantatray fa tsy hanary anay mandrakizay Ianao. Mihainoa ny vavakay, mamalia anay araka ny fanaonao. Nangatahiny amin’ny anaran’i Jesoa izanyvavaka izany. Amena.
Ny hira ffpm 427: 1,3 « Ho vavolombelonao » no nasaina nohiraina avy eo dia notononina ny tondrozotra avy eo ary natolotra ny tsodrano. Nofaranana tamin’ny trinité masina sy ny vavaka mangina.
Nitarika ny fotoana: Rtoa Raharijaona Rasetamanana Bodoarisoa
Dimy minitran’ny Sekoly Alahady: Razafindrasata Abel
Vavaka mialoha ny vakiteny: Raharijaona Valiha
Vakiteny: Raharijaona Valiha sy Raharijaona Nantenaina
Nitory ny teny: Ny Mpitandrina Raharijaona Solofonirina
Nandray an-tsoratra Rajaofetra Voahangy sy Seta. Naka ny sary :Rajaofetra Seta sy Ranaivoson Joël